AMAPHULO – ISiseko iJakes Gerwel
Home » AMAPHULO
Sinombulelo kuNkosazana Phoebé Gerwel ngokunikela kwakhe ngendlu yembali kwisitrato I Paulet yothandekayo uNjingalwazi Jakes Gerwel kumazantsi wehlobo lwentaba i-Bosberge enomtsalane e-Somerset East – emaxela nomgama ongange 200 km kuMntla weBhayi eMpuma Koloni – ukuyakutsho kwiSiseko i- Jakes Gerwel. Le ndlu enobubele kunye nomtsalane wayo wamandulo, imagumbi avulekileyo, omgangatho wayo wenziwe ngeplanga kwakunye negadi eyokozelayo inika ithuba elifanelekileyo kubabhali ukuba basebenze kwimibhalo yabo ebhalwe ngesandla kwindawo ekhuthazayo. Ukuvula amacango wePaulet House banzi isiSeko i-Jakes Gerwel ifuna ukuzalisekisa umsebenzi wayo wokuxhasa ababhali boncwadi abasaqalayo ngakumbi kwinkqubo yokubhala.
Somerset East writers’ house
Inkqubo yokucebisa ababhali abasakhulayo
Le nkqubo siyenza ngokubambisana nabashicileli be-NB (ikhaya kwabashiye umzila Tafelberg, Human & Rousseau, Kwela, Queillerie, Lux Verbi and Pharos) ejolise ekukhuliseni nasekuxhaseni ababhali abasakhulayo ngexesha lokuphuhlisa iimibhalo yabo yezandla khona ukuze zenziwe zibenako ukuba zipapashwe. Sigxila kwabo babhali banebali lokubalisa, abangazange babe bayapapasha ngaphambili yaye mhlawumbi abangakwazi ncam ukuthi babhale ephepheni. Ibhekiselele ngakumbi kubabhali abangenandlela yokuzihlawulela iindleko zokungena kwizikolo zokubhala. IsiSeko i-Jakes Gerwel kunye nabaShicileli i-NB Publishers banomdla wokuncedisana naba babhali ekubaliseni amabali amatsha futhi angafane axhatshazwe kuncwadi loMzantsi Afrika. Abacebisi abanolwazi nabanamava bazakukunceda ababhali abangabathathi nxaxheba ukwenza amabali wabo akugqibelelise, umntu ngamnye nangaphakathi kumaqela. Ababhali kwakunye nabaqeqeshi bayakusebenza kunye ngokwamaxesha athile eSomerset East kwindlu yababhali yeSiseko esi yaye bazakuhlala beqhagamshelana nge meyile unyaka wonke. Sigxila kwiimbali ezizizo okanye ezobunyani kwakunye nezingezizo zesiNgesi nesiBhulu.
ISiseko i-Jakes Gerwel iqale iYoh! project ngo2018 e-Grassy Park High School eCape Flats Flats apho uNkosazana Phoebé kwakunye noNjingalwazi uJakes Gerwel bashiya umzila khona. I-Yoh! iququzelelwe nguGqirha Thérèse Hulme oyingcali enamava esebenza ngokunyanga abantu, unyango olujoliswe ekunciphiseni okanye ukuphuhliseni iingxaki. Ukwayiyo ne-presenter yamaphulo okubhala ngobuchule kwabantu abatsha eNtshona Koloni.
I-Yoh! yiprojekthi yokubhala ngobuchule ekwayiyo nenkqubo yokuqeqesha.
UThérèse uthi: ‘Ndiye ndafumanisa ukuba kunamava obuchule okukuko yaye okunzulileyo, ukusebenza kolwimi kwakunye nobulumko buphila kubantu abatsha. Okukunzula kulinde ukusetyenziswa futhi kuziswe ekukhanyeni. Iprojekthi ingokokubhala ngobuchule ngendlela yokuzisa obubutyebi ekukhanyeni. Ikwayiyo nedlela yam yokusabela kwiingxaki eziphawula ubomi bolutsha oluninzi lwaseKapa. Le projekthi ijolise ekubeni ibeyindawo apho umsindo, ukunganakwa, ukufuduka, ukuphelelwa lithemba nokulimala kuyakuthi kuqatshelwe futhi kuziswe kwindawo ekhululekileyo.Kwangokunjalo, abantu abatsha bafumanisa ukuba banaxabiso lini, ixabiso elifana nentlonipho kwabanye, ubulungisa kuluntu, imfesane kwabo basokolayo kwakunye nokufumanisa ukuba ubomi okanye ukuphila kuyinto entle.
Ngaphandle kokusetyenziswa kolwimi, iinjongo zaleprokekthi ikwakukuyila ubuhlobo bethemba kunye nabantu abatsha khon’ukuze baqonde ukuba banento enexabiso abangathi bayithethe yaye kukhona umntu ofuna ukubamamela. Le projekthi ingokwethembela kumava wabantu abatsha nangokufunda ukumamela.
UThérèse ufumanise ukuba xa bathe ootitshala balandela le ndlela yokubalisa baye babhaqe iitalente ezimangazayo, iingqiqo, kwakunye nolwimi oluchukumisa intliziyo, ngamanye amaxesha oku kusukube kuphuma kubafundi abo kungalindelekanga oko kubo. Ekugqibeleni iYoh! yiprojekthi yokufumanisa ukusebenzisana ngokufanayo nokuphucula, kwanokufumana ukuzivakalisa ngeendlela ezahlukileyo zemibongo.
Ezinye zeembongi zeYoh! zika 2019 zichaza malunga nogalelo oluthe ladlalwa yile projekthi ebomini bazo:
‘iYoh ityhile iimpawu ezikum, ezifana nobuchule bokubhala. Indikhuthaze ukuba zendikhuthaze abanye abantu ngomsebenzi wam.’
– Shawaal Swartz
‘Ingokuthetha ngam, ngakumbi ukuthetha ngeemeko ezinzima.’
– Georgia Abrahams
‘Yindlela yokuthetha ngam. Ndikhumbula imini apho mna noNkosazana uThérèse sasiqala ngqa ukuthetha. Ndaqhwanyaza nje ngeloxesha, aqalisa… amagama aphuma emlonyeni wam. Ndandicinga: mhlawumbi ndinaso isakhono. Mhlawumbi. Ndizakubona ukuba kwenzeka ntoni. Izinto ezibonakalayo zenzeka: ukuya kwikonsathi, ukubonakalisa ubuntu obungaphandle, ukubonakalisa ubuntu obungaphakathi, ukubonisa abantu ukuba ungubani.’
– Connor Sives
‘Ukuba yinxalenye yeqela le Yoh! Kuye kwandivumela ukuba ndikhule kulwazi lwam lokubhala imibongo yaye kwandisa nokuzithemba ukuthetha esidlangalaleni kwanokusasaza umyalezo wemibongo yam kwisihlwele. Iqela eli lithe lanenkxaso kakhulu ekumameleni imibongo yam nangokundigxeka ngendlela eyakhayo kho’ukuze ndenze ngcono.’
– Daniel November
‘Ukuqala kwam ukuva nge Yoh ndandicinga: andikwazi ukubhala imibongo! Kwaye ndaza ndaphulaphula ndaye ndacinga ukuba wonke omnye umntu uyamangaza. Andikwazi, kodwa ndathi ndaqalisa ukubhala. Ndaqaphela ukuba le yimibongo YAM, akakho omnye umntu onokubhala ngalendlela ndibhala ngayo. Ndaqala ukubhala malunga nezinto eziqhelekileyo: i-beetroot, imvula okanye isikolo. KuBhiyozo lukaJakes Gerwel eWoodstock, ndafunda umbongo endandiwubhalele utat’omkhulu wam ophethwe sisifo sengqondo. Abantu baye bandixelela ukuba waye wabachukumisa okanye wabachaphazela kanjani lo mbongo. Bandixelela ukuba ndibenomvakalelo onjani endiwufake kumbongo lowo wam. Kwaba kuhle… Andisazifanisi nezinye iimbongi kangako ngoku.’
‘Eli qela landnika ukuvulwa kwemizwa yam ngokutsha, kunye nendlela yokuzibona ebendingayazi ukuba ikhona.’
– Leila Abrahams
Umbhiyozo wokukhumbula uJakes Gerwel
Kwinyanga kaNovemba nyaka nonyaka, esiSiseko sifuna ukunika imbeko kwimvelaphi kaNjingalwazi uJakes Gerwel ngokukhuthaza intetho okanye ukuthetha ngokukhululekileyo, ukubonakalisa nokuxabisa ubugcisa. Ungathi uzibonele imifanekiso yombhiyozo ka 2018 apha. Qhubeka nokubukela le webhusayithi ngeencukhaca zenkqubo ka 2019.
Photos: Celebrating Jakes Gerwel’s legacy
I-Suidoosterfees books and discourse programme
UNjingalwazi uJakes Gerwel wayebandakanyeka ekuxhaseni umbono weSuidoosterfees othatha indawo eArtscape Theatre Centre eKapa nyaka nonyaka. Nyaka nonyaka esisiSeko sizisa inkqubo yeencwadi kwakunye nenkqubo yentetho ngethuba apho iimpapasho zakutshanje kunye nemibuzo etshisa ibunzi inikwa ingqalelo. I-Suidoosterfees ka 2019 iyakuthi ithathe indawo ukusuka nge 25 ka-Epreli ukuya kwi 1 kaMeyi. Fumana inkqubo epheleleyo apha.
Iincwadi ezandleni zabantwana
Isiseko i-Jakes Gerwel yabelana ngenjongo yeBook Dash ukunika abantwana baseMzantsi Afrika iincwadi abo abazali babo kwakunye nezikolo ezingenakuthi zikwazi ukubanazo. Kunyaka ka-2018 sinikele ngeencwadi ezingaphezulu ko 1000 ukuya ku 3000 kubantwana bamabakala ka0 ukuya ku3 kwindawo eziqeleleyo kakhulu zase Somerset East yaye ezinezinga eliphezulu lentlupheko. ISiseko siqhubeke sanikela ngeencwadi kwiklasi zonke abathe bazindwendwela khona ukuze ootitshala kwakunye nabantwana bafumane kwakhona imimangaliso yamabali yonke imihla. Abanintsi kwaba bafundi abanabo oobhaka besikolo ngoko ke sinikele ngobhaka kumfundi ngamnye. Obhaka esinikele ngabo benziwe ngabafazi ababengaphangeli ngaphambili.
I-Book Dash yenza iincwadi ezintsha nyaka nonyaka ngokuhlanganisa ndaweni’nye imifanekiso, ababhali kwakunye nabaqulunqi ngemini enye. Amabali akwezincwadi aphuma emakhaya futhi akhona kwiilwimi eziliqela ezohlukeneyo. Sinekela ngeencwadi ezibhalwe ngesiBhulu, isiNgesi kwakunye nesiXhosa. ISiseko sethu singathanda ukufikelela kubantwana abanintsi kangangoko benokukwazi njengoko sisazi ukuba akungekhe kubekho mbhali ngaphandle kwabafundi. Ku 2019 sifikelela kwezingaphezulu izikolo Somerset East yaye simema wonke umntu ukuba anikele ngeemveliso eziyakuthi zifakwe koobhaka njengoko sibanika abantwana.
Funda banzi nge Book Dash apha.